မြစ်ဆုံ: ထာဝရ ( ချစ်သူအတွက် )
ထာဝရ ( ချစ်သူအတွက် )
ဒီကဗျာလေးအား မောင်မောင် အမြတ်နိုးဆုံး ချစ်သူလေးကို ရည်ရွယ်ပြီး တင်လိုက်တာပါ။ မည်သို.သော အခြေအနေတွင် ရှိနေပါစေ သူ တစ်ယောက်တည်းသာ ကျွန်တော်ချစ်နေမည်ဟု ဒီ ကဗျာလေးဖြင်. ပြောပါရစေ။ ခုရက်ပိုင်း သူစိတ်ညစ်အောင် လုပ်ခဲ.မိလို. ဒီကဗျာလေးနဲ. ချော.တာပါ။ ဆရာမောင်စိန်ဝင်း ကဗျာလေးတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်သော သူများ လည်း ဒီကဗျာတိုလေးကို နှစ်ခြိုက်လိမ်.မည်ဟု ယူဆပါတယ်။ ကဗျာက တိုတိုလေးဆိုပေမယ်. အနှစ်သာရပြည်.၀လှပါတယ်။
Posted by မောင်မောင် at 19:44
ကဗျာလေး ကကောင်းလိုက်တာ....ချစ်သူတိုင်း အဆင်ပြေကြပီးချစ်ခရီးလမ်းကိုသက်ဆုံးတိုင်လျောက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေ..။။။
Very Good poem. I feel deeply.
ချစ်တက်သူတို့ရဲ့ နှလုံးသား ထာဝရစဉ်လန်းသလို
မှန်းသမျှ အဆင်ပြေပါစေ မောင်မောင်...
မည်သို.သော အခြေအနေတွင် ရှိနေပါစေ သူ တစ်ယောက်တည်းသာ ကျွန်တော်ချစ်နေမည်ဟု-----
ခက်ညွန့်သန် နုသစ်လို့၊ ရစ်ပတ်နှောင်တွယ်
တဲ့..ဆရာပဲရေးတာ။။ သံယောဇဉ်တွေ မထားချင်နဲ့ညီလေးရေ။။ နွယ်ပင်တဲ့နော။။ :P
ဟုတ်ကဲ. အစ်ကိုကြီးရေ သံယောဇဉ်က နှလုံးသားမှာပါရစ်ပါတ်သွားပြီဆိုတော. သူနဲ.ဆုံဖို.ကိုဘဲ ဦးတည်ရတော.မယ်။ အစ်မကြီးဂျက်ရေ မောင်မောင်.ချစ်သူကို ဒီထက်မက ပိုပြီးချစ်ပြချင်တာပါ။ အစ်မဂျက် အစ်မအိန်ဂျယ် အစ်မမီရ်ှလ် တို.ကျေးဇူးပါဘဲနော်။
ချစ်သူကကောက်တတ်တယ်လားအစ်ကို.. အဲဒီလိုကောက်တာကို ချော့ရတာက
ကဗျာလေးကကောင်းလိုက်တာ ဖတ်ခွင့်ရလို့ ကျေးဇူးပါ
မောင်မောင်လဲ ချစ်သူကို အရမ်းချစ်တတ်တာပဲနော်
အဟမ်း အဟမ်း အဟမ်း စစ်ကူပေးရမလားဟေ့ လိုရင်ပြော မောင်မောင်ရေ .
တို့မောင်လေးတစ်ယောက် သနားစရာဖြင့်ကောင်းနေပြီး))
မောင့် ကို ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် ... မောင့်ကိုလည်း ယုအ၇မ်းချစ်ပါတယ် ...
အယ် ဒါချော့တဲ့ကဗျာပေါ့ ဟိဟိ ခွိခွိ :P
ယု က ဒေါင်ဒေါင်းမြည်ဘဲ အစ်မစံရေ။ မောင်မောင်သာ တစ်ခါတစ်လေဆို ချူချာချင်နေတာ။ ကျေးဇူးပါဘဲ အားလုံးကို။